Muuri News Network » Xabaalo wadareedkii lagu Arkay Mandhera waa mindi Uus ku tagtay!!
Xabaalo wadareedkii lagu Arkay Mandhera waa mindi Uus ku tagtay!!
Dec 10, 2015 - Comments off
Mudanaha laga soo doorto magaalladda Mandheera, Senator Billow Keerow ayaa si dhaqso leh uga jawaabay Baaq uu Wasiirka Arrimaha Gudaha Kenya, Joseph Nkaissery kaga dalbaday Siyaasiyiinta W/bari inay raalli-gelin rasmi ah ka bixiyaan hadalladii ay ku sheegeen in Qabuur-wadareed dad badan lagu aasay laga helay duleedka Mandheera.
Joseph Nkaissery ayaa ku goodiyey inuu Sharciga la tiigsan doono, haddii uusan Senator Billow Kerrow iyo Xildhibaanadda kale bixinin Raalli-gelin, kana laabanin waxa uu ugu yeeray Hadalladda lagu kicinayo dadka.
Senator Billow Kerrow waxa uu tilmaamay inuu doonayo inuu u sheego dhamaan dadka Reer Kenya inay ka xun yihiin warkii ku aadanaa in la helay dhowr qabuuro-wadareed o oay ku jiraan dad la la’aa.
Dhinaca kale, Wasiirka Arrimaha Gudaha Kenya, Joseph Nkaissery ayaa ugu baaqay Hay’addaha Ammaanka inay la xisaabtamaan qof kasta oo jebiya Sharciga, wuxuuna beeniyey inay Dowladda ku lug leedahay dadka lagu la’ yahay W/bari Kenya.
Waxa uu sheegay in maydka Haweeneyda laga soo saaray Qabuuraha ahayd Haweeney cunto-kariye u ahayd Xarakadda Alshabaab, waa sida uu hadalka u dhigay.
Allaha U Naxariistee Marxumadaasi oo la oran jirey Isniina Muuse Shiikh oo 29-jir ahayd, waxaa maydkeeda laga helay Qabuur-wadareedka duleedka Mandheera, iyadoo ay ka muuqdeen dhaawacyo, lafahana laga jebiyey, sida ay sheegeen dadkii arkay maydkeeda oo laga soo saaray Qabuuraha, iyadoo uusan maydkeeda wax Karfan ah lahayn.